China Vibrator rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
Akụkụ na-arụ ọrụ nke vibrator bụ oghere dị mkpanaka nke nwere mkpanaka na ikuku nke dị n'ime. N'ịbụ nke moto ahụ na-akwagharị, ọ nwere ike ịmepụta mkpọtụ dị elu na oke ụda na ntanetị. Oge ịma jijiji nwere ike iru 12000-15000 ugboro / min. ọ nwere ezigbo mmetụta vibration, usoro dị mfe na ndụ ogologo ndụ. Okwesiri maka ogwe osisi di egwu, ogidi, mgbidi na ihe ndi ozo na ihe ndi mmadu.
arụ ọrụ ụkpụrụ
Enwere eriri igwe eletriki na electromagnetic vibrator.
Ugbu a nke eriri igwe ahụ dị ugbu a mgbe ọkara mgbanwe ngbanwe. N’ime ọkara dị mma, nke ugbu a na-agafe, na electromagnet nwere mmiri iji dọta efere vibrating ịbịaru nso; n'ime ọkara ebili, na-enweghị ugbu a na-agafe, na electromagnet mmiri na-apụ n'anya. N'ihi mmetụta nke oge opupu ihe ubi, efere ahụ na-ama jijiji na-alaghachi n'ọnọdụ ya, na eriri nri na-eri nri na-ejikọ ya na efere vibrating, yabụ, igwe na-eri nri coal ga-ama jijiji n'okpuru ọrụ nke electromagnetic vibrator
Ngwa nke vibrator
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ na-eji ndị na-eme mkpọtụ na usoro dị iche iche nke mmepụta ọkụ na-ekpo ọkụ. Na ngwa nke vibrator, otu echiche nke otu Kọmitii Nka na ụzụ ahaziri nzukọ iji kwurịta isiokwu a ma nye ndụmọdụ ndị na-esonụ. The vibration na Ngabiga nke hanga na hanga kpatara vibrator ga-agbanwe eruba mode nke ọgwụgwọ mmiri mmiri na zinc mmiri mmiri. Ka ọ dị ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-arụnye ndị na-eme mkpọtụ n’etiti kreenị na galvanized hanger (ma ọ bụ hanga), ma ọ bụ awụnyere na hanga iche. N'ikwu okwu n'ozuzu, vibrator na-ebugharị site na moto abụọ, nke na-agbagharị na ntụgharị ihu na-enweghị nsogbu. Ntọala a pụrụ iche na-ewepu vibrations dị n'akụkụ, na-ebute naanị vibrations vetikal.
Mkpalis anaghị aba uru mgbe niile yana ojiji nke ndị na-eme mkpọtụ na-adabere n'ọnọdụ ọrụ na ụdị akụkụ a ga-ete. N'ọtụtụ oge, ngwa nke vibrator nwere ike melite ogo nke ịkpụ akụkụ ma chekwaa ego ịmegharị. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche nke ikpo ọkụ.
Nke gara aga: Motọ ọma jijiji
Osote: Na-agbanwe gburugburu ebe obibi
Ekwensu mara jijiji
Akpaka Warehouse Wall Vibrator
Ihe ngosi ihuenyo na-ekpo ọkụ
Vibrator Maka Silo
Vibrator N'ihi nkwakọba Wall
Nkwakọba Walllọ Nkwakọba Ihe
Zfb nkwakọba Wall Vibrator